सेतोपाटी ग्लोबल पोर्चुगल, वैशाख १५ print
पोर्चुगलको पर्यटन सम्बन्धी खोजबिन गर्न र लिस्बन घुम्न गएका फ्रान्सका दुई जना पत्रकारले पोर्चुगलमा घुम्ने पर्ने ठाउँहरूको बारेमा नियमित एल पेइस पत्रिकामा लेखिरहेका छन्। उनीहरुको निम्ति सुन्दर लिस्बन शहर जस्तै यहाँ धेरै कुरा सम्भव छ भनेर राष्ट्रपतिसँग खिचेको सेल्फिको कथा पनि हालेका छन्।
राजधानीको कास्काइसमा रहेको समुद्री तटमा घुम्न गएका युवतीहरूले नुहाइरहेका पोर्चुगिज राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो द सउजालाई देखे। सुरूमा त उस्तै कोही होला भने। छेउछाउमा तातो बालुवामा उत्तानो परेर घाम तापेका मानिससँग सोधेको त उनी राष्ट्रपति नै रहेछन्।
कट्टु लगाएर नुहाइरहेका राष्ट्रपतिसँग सेल्फी खिच्न मिल्ला? भनेर उनीहरुले सोधेको त रसिक राष्ट्रपति तयार भइहाले। एकछिन पख्नुहोला, म कपडा लगाउँछु। भन्दै कपडा लगाएर सेल्फी खिच्न तयार भए।
हिड्ने बेलामा राष्ट्रपतिले यहाँको समुद्रमा नुहाउनुको आनन्द अर्कै छ। नुहाउन नभुल्नुहोला नि, अनि यहाँको अंगुरको वाइन चाख्नु भो? चाख्नु होला र घरमा उपहार लगिदिनु भनेर हिँडे।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १५, २०७४ १९:०५:५९